Sunday August 09, 2020 - 16:23:54 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Caabuqa Carona Virus ayaa gummaadkii ugu badnaa ka geystay wadanka Mareykanka oo ah dalka koowaad ee caalami ahaan dadkiisu ladhibanyihiin caabuqan halista badan.
Shalay oo kaliya waxaa Mareykanka Covid19 ugu geeriyooday 1434 qof kuwaas oo badankood ku dhintay gobollada California, Florida, iyo Texas waxaana lasoo wariyay in gobolladaas uu shalay Carona kusoo ritay lixdameeyo kun oo ruux.
War rasmi ah oo kasoo baxay aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo ayaa lagu sheegay in illaa 23 gobol uu faraba'an ku hayo caabuqa Covid19, gobolladan ayaa la sheegay in 20 kamida lagasoo calaamadeeyay 4 milyan oo bukaanno ah taas oo ka dhigan in mareykanku uu yahay dalka ugu bukaanada iyo dhimashada badan caalamka marka laga hadlayo musiibada uu Carona geysanayo.
Aqalka cad ee Mareykanka oo aan looga baran in uu si toos ah uga hadlo halaagga Carona ayaa warbixinta uu soo saaray ku cadeeyay in magaalooyin ay kamid yihiin Boston, Chicago, Detroit iyo Washington ay ka jiraan xaalado laba kaclayn aan horay loo arag islamarkaana sare loo qaaday howlgelinta guddiga caafimaadka ee latacaalayo dadka ladhiban Covid19.
Daraasad cusub oo ay soo saartay Koox caafimaad oo fadhigeedu yahay magaalada washington ayay ku saadaalisay in dadka Americanka ah ee Carona ugu dhimanaya gudaha mareykanka ay gaari doonaan 300 oo kun oo ruux marka lagaaro bisha december ee dabayaaqada sanaddan 2020-ka.
daraasadda ayaa caddaysay in suurtagal ay tahay in laamaha caafimaadka ay badbaadiyaan 70 kun oo kamid ah dadkaas dhimashada qarka usaaran haddii ay bixiyaan dadaallo oo ay joogta uga dhigaan xirashada maaskada sanka iyo afka lagu xirto.
dhimashada guud ee Carona uu ka geystay dalka Mareykanka ayaa hadda kor usii dhaafaysa 161 kun oo ruux sida ay cadeynayaan tirakoobyadii ugu dambeeyay ee lasameeyay.
Sare ukicidda dadka Carona ugu dhimanaya mareykanka iyo kuwa uusoo ridanaya ayaa dhulka sii gelinaya rejadii uu Trump ka qabay in uu markale ku guulaysto doorashooyinka madaxtinimada ee dhici doona bisha November ee soo socota.